Waa Kuwee Ciyaartoyda Rekoodhka Suuqa Kala Iibsiga Soo Jabiyay Tan Iyo 1992-di | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Waa Kuwee Ciyaartoyda Rekoodhka Suuqa Kala Iibsiga Soo Jabiyay Tan Iyo 1992-di
Waqtigan oo kale xagaagii hore waxa uu aduunka kubbada cagtu ka qayliyay in Manchester United ay £93.25 milyan gini oo u dhigmaysay 105 milyan euros ay kula soo wareegtay Paul Pogba, waxaana markaas Manchester Uited loo soo jeediyay eedayn aad u badan, laakiin 12 bilood kadib maxaa dhacaya?.
Haddii si wayn loola yaabay in Manchester United ay rekoodhkii suuqa kala iibsiga u jabisay heshiiskii Pogba, miyaad rumaysan kartaa in 12 bilood kadib uu Neymar Jr kooxda PSG ugu biirayo heshiis kii Pogba ka qaalisan boqolkiiba 110%? Waad ku qasban tahay in aad rumaysato, laakiin waxa uu heshiiska Neymar ee PSG hordhac u yahay qiimo iyo sheeko cusub oo suuqa kala iibsiga ku soo kordhaysa taas oo keeni karta in kooxuhu ay ka cabsadaan in heshiisyada ciyaartoyda lagu daro qodobada sheegaya lacagta heshiiskooda lagu burburin karo.
Haddii aan taariikhda suuqa kala iibsiga dib idiinku celiyo waxay ahayd sanadkii 1932 kii markii kooxda River Plate ay £23,000 kun oo gini ay kula wareegtay Bernabe Ferreyra si ay uga dhigto xidigii markaas aduunka ugu qaalisanaa, wuxuna jabiyay rekoodhkii David Jack oo £10,890 kun oo gini ugu biiray Arsenal afar sano ka hor. Laakiin maanta August 2,2017 waxa uu Neymar PSG ugu biirayaa 222 milyan euros!!!.
Haddaba Sky Sports ayaa sawir ku muujiyay qaabkii loo soo jabinayay rekoodhka suuqa kala iibsxiga tan iyo sanadkii 1992 kii laakiin marnaba may soo dhicin in qaabka waalida ah ee heshiiska Neymar uu hal mar si aan la rumaysan karin uu sarre ugu kacay qiimaha suuqa ee ciyaartoy lagu iibsan karaa.
Halkan kaga bogo sawirka muujinaya qaabkii uu suuqa klaa iibsiga rekoodhkiisa ugu qaalisan loo soo jabinayay, ciyaartoydii ku soo lug yelatay iyada oo halka ka sii hoosaysa aad kag bogan karto sawirka xogta ku ka muuqata oo qoraal ah.
Laakiin qiimaha lacagta sawirkan ayaa ah Pound ama gini taas oo ka qiimo saraysa Euros ka iyada oo lacagta heshiiska Neymar lagu burburin karo ee 222 milyan euroska ahi ay la qiimo tahay 198 milyan gini taas oo boqolkiiba 110% ka badan intii uu Pogba xagaagii hore ugu soo biiray Man Uited.
Haddaba Halkan Kaga Bogo Liiska 16 ka Ciyaartoy ee Tan iyo Sanadkii 1992 kii hadba uu midkood soo ahaa xidiga aduunka ugu qaalisan iyo waliba qiimihii lagula kala wareegay si la mid ah sanadkii uu heshiiskiisa la sameeyay.
1-Jean-Pierre Papin, £10m (1992)
2-Gianluca Vialli, £12m (1992)
3-Gianluigi Lentini, £13m (1992)
4-Ronaldo Luís Nazário, £13.2m (1996)
5-Alan Shearer, £15m (1996)
6-Ronaldo Luís Nazário, £19.5m (1997)
7-Denilson, £21.5m (1998)
8-Christian Vieri, £32.1m (1999)
9-Hernan Crespo, £35.5m (2000)
10-Luis Figo, £37m (2000)
11-Zinedine Zidane, £47.2m (2001)
12-Kaka, £59m (2009)
13-Cristiano Ronaldo, £80m (2009)
14-Gareth Bale, £85.3m (2013)
15-Paul Pogba, £93.25m (2016)
16-Neymar, £198m (2017)